Bogga ugu weyn Waa maxay Barnaamijyada Hagaajinta iPhone iyo sidee u shaqeeyaa?
App navigation waa barnaamij softiweer ah oo ku socda taleefankaaga casriga ah ama aaladda kale ee elektiroonigga ah ee la qaadan karo wuxuuna adeegsadaa tikniyoolajiyadda GPS si uu u bixiyo tilmaamaha waqtiga-dhabta ah iyo waqtiyada safarka la saadaaliyay. Software navigation satellite, oo mararka qaarkood loo yaqaan software navigation GPS, wuxuu ku dhacaa laba qaybood midkood:
Hagitaan ku lug leh xisaabinta dariiqa iyo tilmaamaha laga bilaabo barnaamijka ilaa isticmaalaha iyadoo lagu saleynayo khariidad ku saleysan vektor, sida caadiga ah baabuur-wadayaasha leh foomamka baabuurta qaarkood oo lagu daray gadaal dambe.
Raadinta hagitaanka, oo had iyo jeer leh “sawir” khariidad xagga dambe ah laakiin muujinaya meeshaad tagtay oo oggolaatay in “dariiqyada” la sii diyaariyo, taasoo ku siinaysa shaashadda shaashadda si aad u raacdo. Geocaching ayaa sidoo kale lagu samayn karaa noocaan.
Jidku waa waddo keenta meel aad tagtay (oo inta badan loogu yeero “raad -gurasho”). Qaybta GPS (dibedda ama gudaha) waxay si joogto ah u siisaa xogta booska, ama iyada oo akhrinta ku saleysan waqti go'an, masaafo gaar ah, isbeddel xagga jihada ah oo ka badan xagal gaar ah, ama isku darka kuwan. Qodob kasta waxaa lagu keydiyaa taariikhda iyo waqtiga la xiriira. Jidka raadadka waxaa loo arki karaa ururinta dhibcaha la duubay ama xariijin isku xira. Way u fududahay sida raacitaanka raad -raaca isha si dib loogu noqdo tallaabooyinkaaga.
Wadadu waa dhibco hore loo sii go'aamiyey oo ka kooban waddo horay loo sii go'aamiyey oo aad ku aadi lahayd meesha aad ku socoto. Software -ka badankoodu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto marinka iyo jidka labadaba isku mar.
Bar -tilmaameedyada waxaa loo adeegsadaa in lagu tilmaamo goobo cayiman, sida calamadaha ah “waddada” loo socdo. Iyada oo ku xidhan sida ay u adag tahay aaladda, ayaa waxaa fure u ah adeegsadayaasha ama ka soo dejistay ilo dibedda ah. In kasta oo aanay ku xidhnayn jidadka ama waddooyinka, haddana waxaa loo isticmaali karaa inay fududeeyaan horumarinta waddada iyaga oo dib loo isticmaali karo. Bar -tilmaameedyada waxaa badanaa loo adeegsadaa sababaha “badbaadada”, taas oo u oggolaanaysa waddo loo maro agagaaraha caqabadaha sida biyo -gacmeed (marin -biyoodka) ama durdurrada/qararka/khataraha kale ee ka hortagi kara waddo toos ah oo ka timaadda barta “A” si loo tilmaamo “B” ammaan ahaansho.
10 Barnaamijyada Hagaajinta iPhone ee ugu Fiican
Taleefankaaga casriga ah, waxaa jira tiro aad u badan oo ah barnaamijyada GPS -ka ee lagu kala doorto. Way adag tahay in la ogaado kuwa ku habboon waqtigaaga iyo lacagtaada, iyo kuwa aan ahayn.
Halkan waxaa ah faa'iidooyinka iyo khasaaraha toban ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee badhamada iPhone ee mudan in la fiiriyo oo ku gaarsiin doona halka aad u baahan tahay inaad tagto, iyadoo aan lahayn amar gaar ah.
Qaarkood waxay kaliya u yihiin marin-habaabinta, halka kuwa kale ay leeyihiin shaqooyin ku dhex-jira sida wadaagga goobta warbaahinta bulshada ama raad-raacyada dal-socodka. Dhammaantood waxay leeyihiin qoraallo aasaasi ah oo bilaash ah, halka qaar badan oo ka mid ahi ay ka qaadaan qiimaha bil kasta ama sannadlaha ah astaamo dheeri ah.
1. Khariidadda GOOGLE:
• Si otomaatig ah dib ugu noqo waddada iyadoo ku xiran taraafikada nool, dhacdooyinka, iyo xirnaanshaha waddooyinka si loo helo waddada ugu fiican.
Ganacsiyada muhiimka ah ee la raadinayo waxaa ka mid ah:
La soco waxa ka furan xaafaddaada iyo saacadihii ugu dambeeyay ee shaqo.
Raadi makhaayado maxalli ah oo kuu keena oo ka qaata.
Samee liis dhammaan goobahaaga muhiimka ah.
Iyada oo la cusbooneysiinayo waqtiga-dhabta ah, waxaad halkaas ku gaari kartaa dhakhso;
Ka hor tag taraafikada ETA-waqtiga dhabta ah iyo warbixinnada taraafikada.
Isticmaal macluumaadka gaadiidka-waqtiga-dhabta ah si aad u qabato baskaaga, tareenka, ama wadaagista.
Dib -u -habeyn otomaatig ah oo ku saleysan taraafikada tooska ah, dhacdooyinka, iyo waqtiga xiritaanka waddooyinka.
Iyada oo leh Khariidadaha 'Live View' ee Google, waxaad ku arki kartaa jidka aad u baahan tahay inaad ku raacdo fallaadho iyo tilmaamo si toos ah loo dul saaray dusha hareerahaaga.
Khibrad badan oo Khariidadaha Google;
Raadi oo sahamin adigoon lahayn xiriir internet leh khariidado qadla'aan.
Sawirrada gudaha iyo waddada ee makhaayadaha, dukaamada, matxafyada, iyo in kale.
Khariidadaha gudaha ayaa kaa caawin kara inaad ku dhex socoto meelaha waaweyn sida garoomada diyaaradaha, suuqyada, iyo garoomada.
Tilmaamo qaarkood oo aan laga heli karin dhammaan waddamada
Waxaa loo isticmaali karaa habab kala duwan oo gaadiid.
Wuxuu kugu wargelinayaa ciriiriga taraafikada.
Waxay bixisaa waqtiyada kaxaynta baabuurka iyo imaanshaha.
ETA -yada ku salaysan xaaladaha gaadiidka hadda.
Waa la heli karaa iyada oo aan la lahayn xiriir internet.
Ma jiraan wax ikhtiyaar ah oo lagu wadaago warbaahinta bulshada.
Dib-u-eegista qaarkood waxay ka cawdaan maqnaanshaha ama tilmaamaha jihada xigta, taasoo keenaysa in dadka isticmaala ay seegaan marinnadooda.
GPS ayaa xaalufin kara nolosha batteriga taleefankaaga.
Haddii aad si khalad ah u leexato, waxay si joogto ah dib kuugu celin doontaa wadadii asalka ahayd, xataa haddii waddo cusubi degdeg tahay.
Sannadka 2021, dib -u -fiirinta adeegsadaha ayaa quseysa walaacyada ku saabsan cusboonaysiinta app -ka, sida tirtiridda shaqooyinka sida wareegyada soo socda iyo is -beddelka waddada otomaatiga ah shilalka awgood.
Ku rakib macruufka
Barnaamijkani wuxuu u taagan yahay maxaa yeelay wuxuu adeegsadaa xogta taraafikada ee dadku ku badan yihiin, Waa app navigation iPhone.
Baabuurkaaga, ka eeg waxa ka socda taraafikada, booliisyada, khataraha, iyo wax kaloo badan.
Si dhakhso ah halkaas u tag - Isbeddelka waddada ayaa isla markiiba loo sameeyaa si looga fogaado taraafikada loona badbaadiyo waqtiga.
Waze waxay fududeyneysaa dhageysiga muusikada adiga oo kuu oggolaanaya inaad gasho muusigga aad jeceshahay, podcast -ka iyo barnaamijyada kale.
Waqtigaaga Imaanshaha wuxuu ku saleysan yahay tirakoobka taraafikada ee waqtiga-dhabta ah, markaa waad ogaan doontaa goorta aad imaan doonto.
Ka hel batroolka ugu jaban jidkaaga si aad lacag ugu keydiso gaaska.
U adeegso Waze shaashadda baabuurkaaga markaad ku waddo Apple CarPlay.
Had iyo jeer ogow meesha aad u socoto - ka dooro codad kala duwan si ay kula taliyaan markaad baabuurka waddo.
Dejinta asturnaantaada ayaa gabi ahaanba gacantaada ku jirta.
Jihooyinka Waze looma jeedin xaaladaha degdegga ah ama xaaladaha baabuurka waaweyn.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah ee shilalka, dhismaha, booliska, xiritaanka waddooyinka, iyo dhacdooyinka kale ee la xiriira taraafikada si aad u qorsheysato waddo kale.
Qiimaha gaaska ee hadda jira waxaa wadaagi kara dadka isticmaala.
Ku -xiridda app -ka Facebook wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la wadaagto goobtaada jadwalkaaga.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad aqoonsato waddada ugu waxtarka badan ee ku saleysan xaaladaha taraafikada, adiga oo waqtiga kuu badbaadinaya.
Shaqada waddada iyo astaamaha kale ee carqaladeeya ayaa laga yaabaa inay qariyaan khariidada oo ay qariyaan aragtidaada.
Haddii aad hesho ogeysiisyo badan oo maqal ah, astaamaha bulshadu waxay noqon karaan wax laga xumaado.
Sababtoo ah barnaamijku si joogto ah ayuu u cusbooneysiiyaa macluumaad cusub, batteriga taleefanka ayaa laga yaabaa inuu si dhakhso ah u dhammaado.
Mid ka mid ah adeegyadii ugu horreeyay ee PC -ga ayaa hadda loo heli karaa app ahaan, sida app -ka iPhone -ka.
Astaamaha khariidada iyo maraakiibta:
Sawirada dayax -gacmeedyada oo casriyeysan
Raadinta codka ee jihooyinka iyo wadista waddooyinka oo leh jihooyin-ka-rogis
Cusboonaysiinta taraafikada ee waqtiga-dhabta ah si ay kaaga caawiso go'aaminta waddooyin kale oo loo socdo meeshaad ku socoto
Kaamirooyinka taraafikada waqtiga-dhabta ah si ay kaaga caawiyaan qorsheynta safar badbaado leh
Waddooyinka kaa caawin doona inaad keydiso waqti, batrool, iyo lacag
Xawaaraha xawaaraha si loo barbardhigo xawaarahaaga hadda iyo xadka xawaaraha ee la dhajiyay ee jidkaaga
Faa'iidooyinka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad keydiso meelaha loo safro sida gurigaaga iyo cinwaannada shaqada ee khariidadaha degdegga ah iyo tilmaamaha.
Ikhtiyaarada jidadka, markaa waxaad haysataa ikhtiyaarro dheeri ah oo aad ku tagi karto meesha aad u baahan tahay inaad dhaqso u tagto.
Waddooyin kale oo kuu oggolaanaya inaad ka gudubto waddooyinka waaweyn iyo kuwa lacag -bixinta.
Jid -gooyooyin badan, oo kuu oggolaanaya inaad samaysato wax ka badan hal joogsi.
Waddo -marin: diyaari waddooyin ka baxa dhibco aan ahayn booskaaga hadda.
Samee wax badan si aad u hesho dariiqaaga:
U adeegso bar -dabaqyadayada si aad u ogaato oo sahamiso meelaha xiisaha leh sida makhaayadaha, baararka, saldhigyada gaaska, iyo huteelada.
Ka raadi oo ka ballanso heshiisyada hudheel aad u fiican isla markaaba MapQuest: Maps & GPS app app.
Ku qanci cuntadaada gudaha adiga oo daalacanaya menus -ka, samaysanaya boos celin, iyo dalbashada cuntada iyada oo loo marayo goobaha xiisaha leh ee OpenTable iyo GrubHub.
Fadlan maskaxda ku hay in socodka GPS ee gadaal laga yaabo inuu si weyn u yareeyo nolosha batteriga.
In kasta oo ay sidoo kale bixiso mar-mar-mar-marinta iyo macluumaadka taraafikada, haddana diiradda ayaa ugu horreysa khariidadaha iyo jihooyinka wadista.
Waxay bixisaa waddooyin kala duwan oo aad ka soo xulato iyadoo ku xiran dookhyadaada.
Wuxuu kugula talin karaa meesha laga helo qiimaha gaaska ugu weyn.
Waxaad u adeegsan kartaa app -ka si aad u raadsato oo aad u ballansato ballanta huteelka iyo makhaayadda.
Dadka qaar waxaa lagu damiyaa xayeysiis soo-baxaya.
Baaxadda maabka ayaa adkayn karta in la kala saaro faahfaahinta.
Nooca moobilka ayaa laga yaabaa inuu bixiyo tilmaamo aan sax ahayn.
Gelitaanka qadla'aanta suurtogal ma aha.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay socotada adduunka, sida app navigation iPhone, astaamihiisa ugu weyni waa marin-u-helka khariidadaha tayada sare leh ee adduunka oo dhan.
In ka badan 140 milyan oo socdaalayaal ah ayaa aamminsan khariidadahayaga degdegga ah, faahfaahsan, iyo gebi ahaanba aan tooska ahayn ee leh hagitaan-ka-rogis.
Keydso xogtaada moobiilka; uma baahnid internet.
Meel kasta oo adduunka ka mid ah ku wad baabuur -wadid, socod, ama baaskiil wadid.
Iyada oo la raacayo hagitaannada safarka ee diyaarka ah, waxaad ku keydsan kartaa waqtiga diyaarinta fasaxaaga oo waligaa ha seegin goob xiiso leh. Waxaan isla kaashannay qaar ka mid ah soosaarayaasha ugu sarreeya ee safarka si aan ugu abuurno ururinta hagaha safarka boqolaal meelood oo adduunka oo dhan ah. Haddii aad doorbidayso safarka magaalada ama hawlaha bannaanka, waxaa jira hageyaal kala duwan oo aad kala dooran karto.
Tilmaamaha POI -yada, jidadka socodka, iyo meelaha kale ee aan lagu arag khariidadaha kale.
Malaayiin ka-qayb qaatayaasha OpenStreetMap ayaa maalin walba cusboonaysiiya khariidadaha Khariidadaha Google iyo Khariidadaha Apple ayaa ah ilo kale oo lagu beddeli karo OSM.
Si aad si hufan u keydiso meesha xusuusta, adeegso raadinta offline, GPS navigation, iyo khariidadaha la hagaajiyay.
Keydso meelaha aad jeceshahay oo u sheeg asxaabtaada iyaga.
Waa lama huraan guriga iyo fasaxa labadaba.
Ka raadi makhaayadaha, kafateeriyada, goobaha dalxiiska, hoteellada, ATM -yada, iyo gaadiidka dadweynaha oo kala duwan (metro, bas, iwm).
Si toos ah uga samee boos celinta hoteelka adiga oo adeegsanaya Booking.com.
Dir fariin qoraal ah ama isticmaal warbaahinta bulshada si aad ula wadaagto goobtaada.
App -ku wuxuu tilmaamayaa inaad baaskiil waddo ama aad kor u socoto ama hoos u socoto.
Isticmaalka GPS -ka ee gadaashiisa muddo dheer oo si weyn hoos ugu dhigaya nolosha batteriga.
Khariidadaha. Waxaa loo heli karaa soo dejinta iyo adeegsiga lacag la'aan.
Habka si toos ah loo raaco, jihooyinka marba dhinac loo leexiyo, iyo tirakoobyada taraafikada ayaa ka mid ah astaamaha la heli karo.
Awoodda khadka tooska ah waxaa ka mid ah muujinta raadinta, marin -habaabinta, iyo kartida helitaanka meelaha wax lagu cuno iyo ATM -yada.
Waxaad la wadaagi kartaa goobtaada dadka kale markaad internetka ku jirto.
Barnaamijkan wuxuu adeegsadaa awood batari oo ka yar kuwa kale ee ku shaqeeya gadaasha maxaa yeelay wax walba waxaa lagu sameeyaa qadka.
Ganacsiyada ku yaal khariidadaha si joogto ah looma cusboonaysiiyo.
Cusboonaysiinta ayaa sababtay in khariidaduhu si tartiib ah u rartaan, is -dhexgalka ayaa adkaaday in la isticmaalo, iyo khariidadaha oo ay adag tahay in la akhriyo, sida ay sheegeen dadka isticmaala.
5. GPS SCOUT:
Waxay isu xayeysiisaa inay tahay “app navigation navigation social gaarka ah | app navigation iPhone. ”
Markaad ku xirto iPhone-kaaga gaarigaaga adoo adeegsanaya USB iyo Bluetooth, waxaad ka heli doontaa marin-u-hel buuxa iyo howlaha Riix-ku-Hadalka shaashaddaada badan.
Qaabka MapStream, muuqaal khariidad toos ah oo kula socdaalaya 2D/3D, ayaa laga heli karaa baabuurta Lexus iyo Toyota qaarkood.
Si otomaatig ah u gal marinnadaada, meelaha aad dhowaan tagto, iyo meelaha aad ugu jeceshahay taleefankaaga iyada oo ay ugu wacan tahay xiriir aan kala go 'lahayn baabuurkaaga.
Helitaanka marin-u-helidda barnaamijyada saddexaad sida Yelp iyo Shidaal oo leh hal saxaafad
Astaamo kasta, sida jihooyinka muuqaalka tooska ah, raadinta si sahlan loo heli karo taabashada ama codka, iyo habeynta habeen iyo maalin si otomaatig ah si loo yareeyo dhaldhalaalka, ayaa loo hagaajiyay wadista baabuurka.
Marar badan la-qabashada barnaamijyo kale oo ku jira bandhiggaaga-dhageysiga muusigga ama wicitaanka wicitaannada — marka la socdo waxaa suurtogal ah in lagu arko aragtiyo shaashad ah.
Shaashadda guriga ee raaxada leh oo si dhakhso leh loogu heli karo astaamaha muhiimka ah sida hal-taabasho badhitaan loogu tago gurigaaga iyo xafiiskaaga.
Iyada oo ku saleysan xaaladaha taraafikada waqtiga-dhabta ah iyo ETA, dariiqyada ugu wanaagsan ee loogu safro dhaqso.
Raadinta Hal-Sanduuq, waxaad si dhakhso ah ugu qori kartaa cinwaanno ama goobo aadna ka heli kartaa talooyin sida aad wax u qorto.
Ogeysiisyada tooska ah ee toosinta, waxaad ka fogaan kartaa ciriiriga taraafikada iyo khataraha waddooyinka.
Adeegso amarrada codka iyo qaybaha raadinta caanka ah si aad u hesho meelo aad wax ka cunto, wax ka iibsato, gaas ka hesho, iyo wax kaloo badan.
Dib u bilow safarada la baajiyay oo dhegeyso tilmaamaha maqalka mar kale.
Si aad u aragto qaabka MapStream oo u dhaqaaqaya khariidado ku soo bandhigaya muuqaallo badan, dooro baabuurta Lexus oo leh Lexus app ama baabuurta Toyota oo leh app Toyota oo leh Muuqaal Muuqaal kuna xir USB ama Bluetooth. Habka TurnStream TM, oo leh jihooyin-ka-rogis kaliya oo aan lahayn khariidad dhaqaaqaysa, ayaa noqon doonta muuqaalka warbaahinada badan.
Mode MapStream UMA HELI KARO GAADIIDKA LEXUS IYO TOYOTA EE 2017 IYO KA HOR
Iyada oo ku xidhan soo saaraha baabuurka iyo moodeelka, kartida iyo waayo-aragnimada baabuurka ee Scout GPS Link way kala duwanaan kartaa.
Wareeg-rogis-leexasho, macluumaadka taraafikada waqtiga-dhabta ah, iyo cusboonaysiinta xawaaraha ayaa ah dhammaan astaamaha caadiga ah.
Waxay bixisaa cunsuriyada bulshada sida makhaayadaha xaafadda ee ay ku taliyaan dadka isticmaala.
Waxaad si toos ah ugu diri kartaa dadka si aad ugu sheegto marka aad filayso inaad timaado.
In kasta oo nooca aasaasiga ahi yahay bilaash, astaamaha qaaliga ah sida GPS waa $ 4.99 bishii ama $ 24.99 sanadkii.
Waqtigaas, barnaamijka waxaa laga heli karaa oo keliya Maraykanka.
Sababtoo ah softiweerku wuxuu ka shaqeynayaa asalka, waxaa laga yaabaa inuu yareeyo nolosha batteriga taleefankaaga.
Wadaagista goobta awgeed, dhowr isticmaale ayaa walaac ka muujiyay ammaankooda iyo asturnaantooda.
6. QORSHAHA WADA-HADDA:
(Astaamaha qaarkood waxay u baahan yihiin barnaamijka badhanka iPhone WinRoute Pro; hoos ka eeg):
Illaa 150 meelood ayaa lagu socon karaa iyadoo la adeegsanayo amarrada codka, oo ay ku jiraan ogeysiisyada cimilada daran (digniinta ayaa hadda laga heli karaa Mareykanka, Kanada, iyo EU).
Dib -u -hagaaji dhibcaha jidadka ama hagaaji jadwalka waqtiga ugu dhaqsaha badan.
Faylasha XLSX, GPX, iyo KML dhammaantood waa la soo gelin karaa.
Ka dhis jidkaaga meelo kale oo la heli karo lug kasta oo waddo ah ama samee waddooyin aan wanaagsanayn iyadoo ku xiran cimilada, dhererka, iyo qalooca.
Jaantusyada is -dhexgalka ah, waxaad ku arki kartaa dariiqa sare, qalooca, cimilada (heerkulka, huurka, roobka, xawaaraha dabaysha/jihada, digniinta cimilada daran), iyo waqtiyada qorrax -soo -baxa/qorrax dhaca.
Ka hel gaas, mootooyin, kaamam, ama maqaayado ku yaal waddo -waddada oo dhan, x mayl/saac kasta, ama x mayl/saacadaha xiga meel.
Qorshaha Bixitaanka iyo Wakhtiga Layover — Saadaasha cimilada, xaaladaha waddada (tusaale, taraafikada), iyo waqtiyada safarka ayaa dhammaantood sax noqon doona inta safarka lagu jiro.
Keydso waddooyinka iyo goobaha aad ugu jeceshahay, isku waafaji inta u dhexeysa aaladaha, u diyaarso galalka, ku daabac iyaga oo isticmaalaya Airprint, oo la wadaag asxaabta iyo qoyska.
Adeegso biin la daadiyay, Raadin, ama Xiriirada si dhakhso ah loogu daro goobaha khariidada.
Khariidadaha Apple, Khariidadaha Google, Navigon, iyo Waze ayaa dhammaantood loo isticmaali karaa dhoofinta waddooyinka. Shaqada "Agenda Nav" ee inRoute waxaa adeegsada barnaamijyada qaarkood.
Faylasha GPX waxaa loo dhoofin karaa aaladaha GPS iyo barnaamijyada.
Waddooyinka ayaa lagu keydiyay aaladdaada waana la geli karaa xitaa haddii xiriirkii internet -kaagu kaa lumo.
U qorshee jidkaaga hadba cimilada, sare u qaadista, iyo qalooca waddada.
Dhig biinanka meesha aad rabto inaad ku safarto, barnaamijkuna wuxuu kuu abuuri doonaa waddo.
Ka raadi waxyaabaha sida mootooyinka iyo kaalmaha shidaalka ee waddada.
Cimilada aadka u daran ayaa sidoo kale loo qoondeeyay hagitaan-ka-rogis.
Astaamaha ku habboon raacitaanka mootooyinka, safarada RV, iyo jidadka xamuulka.
Waxa kaliya oo aad naqshadayn kartaa waddooyin leh ilaa 8 goobood oo ah nooca bilaashka ah.
Jidadka leh ilaa 150 goobood, inRoute Pro qiimaheedu waa $ 3.99 bishii ama $ 39.99 sanadkii. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isku dayi kartaa bilaash hal toddobaad.
Orodka gadaashiisa, waxay hoos u dhigaysaa batterigaaga.
Haddii aad ka leexato waddada, way adkaan kartaa inaad ku soo noqoto dariiqa.
7. Khariidadda Tufaaxa:
Sababtoo ah waxay u soo degsan tahay sidii app -ka navigation iPhone, waa tartamayaasha ugu tooska badan Khariidadaha Google.
Astaamaha cusub ee Khariidadaha Apple waxaa ka mid ah:
Baaskiil - Hadda waxaad heli kartaa tilmaamaha baaskiilka adigoo isticmaalaya Khariidadaha, oo ay ku jiraan waddooyinka baaskiilka, waddooyinka, iyo waddooyinka. Waxaad fiirin kartaa kor u qaadista, waddooyinka mashquulka ah, jaranjarooyinka, iyo tuneelada dhaadheer marka aad qorsheynayso jidkaaga. Khariidadaha sare u qaadista si loo go'aamiyo haddii aad ku jirto jimicsi aad u culus ama socod raaxo leh oo raaxo leh. Xitaa waxaad mari kartaa waddo ka fogaata buuraha iyo waddooyinka cidhiidhiga ah gebi ahaanba.
Guides - U adeegso Hagayaasha si aad u hesho goobo aad u fiican oo aad wax ku cunto, wax ku iibsato, oo sahamiso. Tifaftirayaasha Khariidadaha Apple waxay iskaashi la sameeyeen sumcado caan ah si ay u siiyaan Hagayaasha meelo aad u fiican si ay wax uga cunaan, u dukaameystaan, una sahamiyaan adduunka oo dhan. Waad kaydin kartaa Hagayaasha, oo si otomaatig ah ayey u cusboonaysiin doonaan marka meelaha cusub lagu daro, iyagoo hubinaya inaad haysato macluumaadka ugu dambeeyay.
Wadada EV - Socodka baabuurka korontada, waxaad ku qorshaysan kartaa safarada adiga oo wata koronto korontada taageersan oo si otomaatig ah loogu daray dhibcaha lacag -bixinta. Khariidadaha iyo nooca xeedho ee ku habboon baabuurkaaga oo ku toosin doona iyaga.
Kaamerooyinka Xawaaraha iyo Casaanka -Ogow goorta aad ku soo dhowaanayso xawaaraha iyo kaamirooyinka iftiinka guduudan safarkaaga.
Sifee Goobta - Baadhitaanka khadadka cirka ayaa hadda bixin kara goob aad u sax ah iyo jihaynta aagagga dadku ku badan yihiin.
Marna ma sahlaneyn in wax laga qabto;
Markaad baabuur waddo, fuushan tahay, ama socoto, isticmaal hagitaan-leexasho leexasho-leexasho ah.
Hel macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee tareenada dhulka hoostiisa mara, basaska, tareenada, iyo doonyaha, iyo sidoo kale tilmaamaha.
La soco xaaladaha taraafikada, dhacdooyinka, iyo xiritaanka waddooyinka waqtiga-dhabta ah.
Kahor intaadan dhaqaaqin xigta, hel talo ku saabsan haadka ay tahay inaad gasho.
Hubi xadka xawaaraha ee waddada aad marayso.
Wareeg-rogis-leexasho, jihooyinka gaadiidka, iyo Waqtiga Fariimaha ayaa dhammaantood laga heli karaa shaashadda Qufulka.
Soo hel baabuurkaaga baarkinka ah oo hel tilmaamaha wadista.
Khariidadaha, waxaad ku heli kartaa isbeddelada waqtiga-dhabta ah ee faahfaahinta duulimaadkaaga.
Meelo cusub oo la helo oo la baadho;
Raadi macluumaadka goobta, sida saacadaha, sawirrada, qiimeynta, dib u eegista, iyo taageerada Apple Pay.
Ku dhex raadi oo ku raadi qaybaha, sida cuntada, cabitaanka, tafaariiqda, madadaalada, iyo qaar kaloo badan.
Adeegso Khariidadaha si aad u samaysato boos celin makhaayad, garaac lambarrada taleefanka, oo booqo bogagga internetka.
Eeg khariidadaha gudaha oo faahfaahsan boqolaal suuqyo iyo garoomo diyaaradeed oo adduunka ah.
Ku kaydi meelaha aad ku badan tahay liiska Favorites -kaaga si dhakhso loo helo.
U sheeg Siri meeshaad rabto inaad tagto oo way kuu heli doontaa.
Adiga oo aan ka bixin gurigaaga, u safro aagag cusub;
Fiiri Around wuxuu bixiyaa heer-hoose, qaraar sare, waayo-aragnimo 3D is-dhexgal ah oo ku yaal magaalooyinka la xushay.
Flyover wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hawada ka aragto magaalooyin caan ah oo adduunka ah, oo leh sawir-macquul ah, aragtiyo 3D is-dhexgal leh.
Isticmaal mid ka mid ah qalabkaaga;
Adeegso iCloud si aad uga hesho meelaha aad jeceshahay Mac, iPad, iPhone, ama iPod taabashada.
Baabuurka ku qalabaysan CarPlay, isticmaal Khariidadaha leh muujinta gaadhigaaga.
Markay tahay waqtigii la leexan lahaa, isticmaal Khariidadahaaga Apple Watch si aad u hesho qasabadaha gacantaada.
Ku samee qorshe safar Mac -kaaga oo la wadaag Khariidadaha aaladdaada iOS.
Astaamaha iyo helitaanka ayaa ku kala duwanaan kara waddan ama goob.
Wuxuu bixiyaa astaamo ay ka mid yihiin badhamada codka iyo tilmaamaha marba dhinac u leexdo.
Dhismayaasha waxaa lagu daray muuqaalka khariidada 3D ee jihooyinka.
Waxay ku siisaa dalxiis dal -ku -gal ah meeshaad u socoto iyadoo la adeegsanayo astaamaha Flyover.
Khariidaddu waxay tusaysaa cimilada iyo tayada hawada meeshaad u socoto.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay ku andacoodaan in jihooyinka bixitaanka iyo macluumaadka meheraddu aysan sax ahayn.
Ma jirto ikhtiyaar aad u adeegsan karto khariidadaha qadka.
Muuqaalka muuqaalka hareeraha Muuqaalka hareeraha kama bixiyo sawirro meel kasta oo Maraykanka ah. Intaa waxaa dheer, waxaa si gaar ah looga heli karaa shan dal.
8. RABINTA GPS -KEBILOTKA:
Waa app navigation iPhone oo diiradda saaraya qorshaynta waddooyinka baabuurta, RV -yada, iyo baabuurta waaweyn.
BADASHADA TAFRIFKA IYO GAADIIDKA;
Ka fogow dhibka adiga oo isticmaalaya waddada PC*MILER si aad uga fogaato buundooyinka hooseeya iyo jidadka waaweyn ee xamuulka qaada.
Baabuurka dhexdiisa, ku-habboonaanta darawalka, tilmaanta aan jeedin si aad xoogga u saarto wadada
Qorshee safarada ugu fiican baabuurkaaga iyo xamuulkaaga.
Kaydso lacag adiga oo iska ilaalinaya ganaaxyada, yaraynaya safarka ka baxsan waddada, iyo yaraynta isticmaalka shidaalka.
La kulan waqtiyada kama dambaysta ah oo hel ETA sax ah oo leh taraafikada waqtiga-dhabta ah
BAARITAANKA IYO BAABUURKA:
Ka dooro ilaa saddex waddo oo kala duwan si aad u hesho waddada kuugu habboon.
Khariidadaha qadka tooska ah ee darajada baabuurta, waxaad ku wadi kartaa adigoon ku tiirsanayn tilmaanta mobilada.
Malaayiin meelood oo horay loo soo buuxiyey ayaa kaa caawinaya inaad ogaato waxa kugu xeeran.
Ka fogow ciriiriga taraafikada oo leh taraafikada waqtiga-dhabta ah iyo dib-u-socod toos ah*.
Khariidadaha adduunka **, waxaad ku sahamin kartaa meel kasta, waqti kasta, iyo qaab kasta.
GARGAARKA IYO RV RABINTA:
Waddooyinka iyo tilmaamaha gaarka u ah RV ee ku salaysan cabbirka baabuurka
Khariidado aan toos ahayn oo la isku hallayn karo, mar dambe kuma dhegi doontid.
Ka raadi malaayiin goobood oo horay loo raray, sida xeryaha iyo meelaha nasashada.
Adeegso fallaadhaha tilmaanta haadka iyo macluumaadka calaamadda bixitaanka si aad u qorshaysato leexashadaada waqti ka hor.
Ka eeg copilotgps.com/map-coverage si aad u hesho caymis khariidad oo faahfaahsan.
Xiriir internet moobil ayaa loo baahan yahay.
Kordhinta khariidada dheeraadka ah ayaa loo baahan yahay.
Gobollada oo dhan ma heli karaan astaantan.
Jidadka la habeyn karo ee dhammaan noocyada gaadiidka, iyadoo la tixgelinayo baaxadda waddada iyo banneynta.
Waxaa suurtogal ah in si toos ah looga faa'ideysto si aad u hesho meelaha sida makhaayadaha.
Socodka maqalka, macluumaadka taraafikada, iyo khariidadaha 3D ayaa lagu daray nooca ugu sarreeya.
Adiga oo wata rukumo dheeri ah, waxaa loo adeegsan karaa meel kasta oo adduunka ah.
Qiimaha khariidada qaaliga ah iyo rukhsaynta taraafikada ayaa u dhaxaysa $ 13.99 ilaa $ 99.99 sanadkii.
Jidadka qaarkood ma qabtaan baabuurta waaweyn, sida ay sheegeen dib -u -eegayaashu, waxaana laga yaabaa in qalabka wax -raadinta la hagaajiyo.
Xogta OpenStreetMap waxaa loo adeegsadaa khariidadan diiradda saaraysa app-ka iPhone.
Khariidada, ku tus meesha aad joogto iyo jihaynta
Waxaad jihaysan kartaa khariidada adiga oo adeegsanaya jiheeyaha ama dhaqdhaqaaqaaga hadda.
Samee liiska kuwa aad ugu jeceshahay meelahaaga ugu muhiimsan.
Samee liis ah POI -yada (qodobbada xiisaha) ee kugu xeeran.
Muujin karaa khariidado khaas ah oo onlayn ah.
Muuqaalka dayax -gacmeedka ayaa la heli karaa.
Wuxuu muujin karaa dul -saarro kala duwan oo leh hufnaan kala -duwan, sida socdaalka/maraakiibta raadadka GPX iyo khariidado kale.
Muuji magacyada meelaha Ingiriisiga, maxalliga, ama higgaadda dhawaaqa oo ah ikhtiyaar.
CarPlay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto khariidada iyo jihooyinka hagaha.
Xog tayo sare leh oo laga helay wada-hawlgalayaasha ugu guulaha badan adduunka.
Khariidadaha caalamiga ah ee OpenStreetMap, oo laga heli karo waddan ama gobol.
Soo dejintu ma xadidna waxaana laga yaabaa in isla markiiba laga sameeyo abka.
Khariidadaha had iyo jeer la socda (waa la cusbooneysiiyaa ugu yaraan bishiiba hal mar).
Khariidadaha dulinka tooska ah ee is haysta.
Khariidadaha foomka onlaynka ah ama kaydka ah ayaa sidoo kale la taageerayaa.
Beddelidda aragtida maalin/habeen ee otomaatiga ah waa ikhtiyaar.
U sheeg saaxiibbadaa meesha aad joogto si ay kuu helaan.
Astaamaha loogu talagalay baaskiiladaha iyo dadka lugaynaya;
Khariidaduhu waxay muujinayaan raadadka socodka, socodka, iyo baaskiilka, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon hawlaha bannaanka.
Muuji qaababka baaskiiladaha iyo dadka lugeeya.
Ikhtiyaarka gaadiidka dadweynaha ee ikhtiyaariga ah wuxuu ku joogsadaa magacyada safka (baska, taraamka, tareenka).
Muujinta xawaaraha iyo joogga waa ikhtiyaari.
Waxay ka shaqeysaa labadaba onlaynka iyo offline -ka.
Waxaad u adeegsan kartaa faylka GPX waddo ahaan adoo soo geliya.
Jihada codka, hagida haadka, ETA, iyo xitaa waddooyinka baaskiilka ayaa dhammaantood lagu daray.
Wadamada qaarkood, waxaa jira wax lagu xiro waddooyinka loo maro barafka.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay muujiyeen inaysan ku qanacsanayn is -dhexgalka app -ka oo ay dhibaato ka haysato helitaanka shaqooyinka.
Shaqada raadinta cinwaanka waa inay fiicnaataa.
10. HALKAN WEGO MAPS & NAVIGATION:
Barnaamij GPS navigation GPS ah oo diiradda saaraya magaalada.
Qaabab badan oo gaadiid, sida baaskiilka iyo wadaagga baabuurka
Adeegyada socdaalka sida boos celinta hoteelka iyo baarkinka
Habka loo helo aagagga danta guud iyo abaabulka dibadbaxyada kooxda
Waxaa suurtogal ah in si toos ah looga isticmaalo adduunka oo dhan.
Waxay abuuri kartaa ururinta aagag caadi ahaan la booqdo.
Waxay bixisaa xogta taraafikada.
Shaqaynta khadka tooska ah sida raadinta iyo marin habaabinta saxda ah hadda ma shaqeyneyso, sida laga soo xigtay isticmaaleyaasha, ka dib cusbooneysiinta 2021.
Waxaa jira xayaysiisyo.
Qaar ka mid ah aaladaha casriga ah ma taageeraan khariidaynta shaashadda buuxda.
Barnaamijyada hagitaanku ma shaqeeyaan marka aadan ku xirnayn internetka?
Barnaamijyo badan oo badhanka ah ayaa la isticmaali karaa iyada oo aan lahayn xiriirinta xogta, iyo GPS -ka inta badan taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada ayaa sidoo kale la isticmaali karaa mid la'aan. Looma baahna in la soo saaro khariidadaha warqaddaada weli!
Maxay yihiin saddexda qaybood ee GPS?
GPS -ku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood, oo loo yaqaanno qaybo, oo wada shaqeeya si loo soo saaro xogta goobta.
Dayax gacmeedyada (meel bannaan) -
Dayax gacmeedyadu waxay ku wareegaan Dhulka, iyagoo u diraya calaamado adeegsadayaasha ku saleysan juqraafi ahaan iyo waqtiga maalinta.
Xakamaynta dhulka -
Saldhigyada kormeerayaasha dhulka ku saleysan, saldhigyada kontoroolka mastarada, iyo anteenada dhulka ayaa ka kooban Qeybta Xakamaynta. Raad -raaca iyo hawl -gelinta dayax -gacmeedyada meel bannaan, iyo sidoo kale calaamadaha dabagalka, dhammaantood waa qayb ka mid ah hawlaha xakamaynta. Saldhigyada kormeerka waxaa laga heli karaa ficil ahaan qaarad kasta.
Soo -qaatayaasha GPS iyo gudbiyaasha, sida saacadaha, taleefannada casriga ah, iyo aaladaha telematics -ka, ayaa tusaale u ah qalabka isticmaalaha.
Waa maxay codsiyada GPS?
Go'aaminta jagada waxaa loo yaqaanaa goob.
Hagiddu waa geedi socodka ka guurista meel meel kale.
La socodka dhaqdhaqaaqa shay ama qof waxaa loo yaqaanaa raad -raac.
Khariidaynta ayaa ah geedi socodka abuurista khariidadaha adduunka.
Waqtiga - Oggolaanshaha cabbiraadaha waqtiga saxda ah in la qaado.
Sidee sax u yahay GPS?
Tirada dayax -gacmeedyada la heli karo, ionosphere -ka, deegaanka magaalo -weynta, iyo arrimo kale ayaa dhammaantood saameeya saxnaanta aaladda GPS.
Maxay yihiin waxyaabaha khatar gelin kara saxnaanta GPS?
Faragelinta ayaa si dabiici ah loo abuuray
Horumarinta teknolojiyadda ee socota, codsiyada badhamada cusub ayaa soo baxaya, mid walbana wuxuu leeyahay astaamo cusub; badankood lama cusboonaysiin ama lama khaldin, laakiin waxay sii wadaan inay u tartamaan darajada sare, markaa filo inaad aragto mustaqbal badan iyo barnaamijyo cusub oo adduunka maraakiibta ah.
Adigoo adeegsanaya mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada badhamada iPhone, waxaad yeelan doontaa dhibaatooyin ka yar helitaanka jidkaaga agagaaraha cusub marka aad haysato iPhone -kaaga.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad ka soo dejiso barnaamijyadan badhanka iPhone -ka dukaanka App -ka oo aad bilowdo inaad hesho agagaarkaaga.
10 -ka ugu wanaagsan ee Barnaamijyada Hagista Android ee Bilaashka ah
10 Barnaamijyada Goobta Baabuurka ee ugu Fiican
14 Barnaamijyada Socodka ee ugu Fiican
22 Barnaamijyada Lacag -Sameynta ugu Fiican ee loogu talagalay taleefankaaga casriga ah ama Mobilada
10 -ka Barnaamijyada ugu Wanaagsan ee Ford Sync Si Looga Dheereeyo Baabuur -wadidda
10 App -ka ugu Fiican ee Muusikada laga soo dejisto Youtube -ka 2022 -ka
Taasi waa wax aan dhammaanteen soo maray. Marka aad jeceshay qayb muusig YouTube-ka ah…
Waa Kuwee Kuwa Ugu Sarreeya Bixiyaasha Biyaha? | Dalalka ugu sarreeya 2022 -ka
Waqtiyada casriga ah, shaqooyinka xirfada leh sida alxanka ayaa dayacan inta badan adduunka. Guud…